ल्याम्पपोस्टमा झुण्डिएको ‘समृद्धि’ | Ratopati
personमनिकर कार्की निवर्तमान exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर ११, २०७५ chat_bubble_outline0
सरकारले केही वर्षअघिदेखि सुरु गरेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ अभियानको बिजोग छ बजारमा । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले त्यस्तो लाइसन्स पाएका छैनन् । कहिले प्रिन्टर बिग्रिन्छ त कहिले सर्भर । यो पङ्क्तिकार आफैले पनि एक वर्षअघि नवीकरणका लागि पठाएको लाइसेन्स अझै ‘स्मार्ट’ भएर हात परेको छैन । वर्षदिनदेखि त्यही नगदी रसिदले काम चलाइँंदै आइएको छ ।
ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारका कार्यसम्पादन हेर्दा लाग्छ सरकार चटक देखाउँदैछ । सरकारले गर्ने जुनसुकै कामले विशेष अर्थ राख्छ । किनकि पहिलो कुरा त्यसमा आम नागरिकको चासो जोडिएको हुन्छ । दोस्रो सरकारको कामकारवाहीमा राज्यको ढुकुटी खर्च भएको हुन्छ । त्यसकारण सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुने जुनसुकै काम हचुवा र लहडको भरमा गरिनु हुँदैन ।
हरेक निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र त्यसले सरकारप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा अभिव्यक्त हुने हुँदा सरकारले त्यस्ता कामकारवाही गर्नु हुँदैन, जसले जग हसाई गरोस् र व्ययभार थपियोस् । किनकि राज्यको निर्णय प्रक्रिया भनेको कुनै कुराको अभ्यास र प्रयोग हुन सक्दैन । लहड, सनक अनि प्रभावको भरमा गरिने त्यस्ता निर्णयले एक त राज्यको ढुकुटीको दोहन मात्रै हुन्छ भने त्यसले अनावश्यक समय खपत हुन्छ । दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारले आम नागरिकका चाहना त परै जाओस् आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । सरकारका कामकारवाही हेर्दा अर्कमण्यता र अन्यौलताको सिकार भएको मात्र छैन विवेकशून्य प्रतीत हुँदैछ ।
त्यसकारण साँच्चिकै यो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने र समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनआस्था जगाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म ध्यान दिन नसकेका यी ५ कामहरू अनिवार्य छन् ।
सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो सङ्घीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन । यो सरकार व्यवस्थामा बदलाव आएपछिको निर्वाचनबाट बनेको ऐतिहासिक सरकार हो । त्यसैले यसका केही विशेष र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि छन् । त्यसैमध्येको पहिलो जिम्मेवारी हो सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नु । यो व्यवस्थाप्रति कसरी विश्वास जगाउने र यो व्यवस्थालाई कामयाबी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्छ । तर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै यो व्यवस्थाप्रति अनास्था प्रकट गर्ने र नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन्, जुन दुःखद पक्ष हो ।
तेस्रो काम हो– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने । सरकारले जोड जोडका साथ विकास र समृद्धिको नारा त लगाएको छ, तर कस्तो विकास ? कसको विकास ? कस्तो समृद्धि ? कसका लागि समृद्धि ? कसरी आउँछ समृद्धि ? के हुन् समृद्धिका अन्तरवस्तुहरू ? यी विषयलाई छिनाउन तयार छैन । प्रधानमन्त्रीका हरेक वचन समृद्धिमय हुन्छन् । समृद्धिको लयात्मक भाषणले ठूलै ग्रन्थ तयार भइसकेको छ । तर, केही नियमित हुने र भइरहेका कामबाहेक ठोस रूपमा विकास र समृद्धिको पहलकदमी देखिएको छैन । अहिले हाम्रो अर्थप्रणालीलाई पुनर्संरचना नगरी विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । यसका लागि हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेरै उत्पादन र निर्माणमा लाग्नुपर्छ । तर सरकारले त्यसरी प्राथमिकता तोक्न सकेको छैन । पुरानै ढर्राबाट गरिने नियमित कामले समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
अहिले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? त्यो नै खुट्याउन सकिएको छैन । सरकार समृद्धिका नाउँमा रेल र पानीजहाजकै सपना बाँडिरहेको छ । अनि देशैभर भ्युटावर निर्माण गरेर टेलिस्कोपमार्फत समृद्धि हेर्ने कार्ययोजना पस्किरहेको छ । सरकारलाई विद्यालयका समस्या समस्या नै लाग्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको चरम् व्यापारीकरण सरकार देख्दैन । जनताको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, सरकारलाई सोच्ने फुर्सद पनि छैन । यो विरोधाभाषको अन्त्य जरुरी छ ।
सरकारको चौथो काम हो– समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउने । कम्युनिस्ट पार्टीको आनुवांशिकी गुण भनेकै सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र साम्यवादको स्थापना हो । देशमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तर भ्रममा रहनु आवश्यक छैन कि नेपालका कम्युनिस्टहरू चरित्रमा पनि त्यस्तै छन् । यहाँ सजिलोका लागि कम्युनिस्ट हुने चलन जो छ । केवल आदर्शका कुरा गरे पुग्ने, साम्यवाद र वर्गविहीन समाजको कल्पनामै रमाए पुग्ने, जीवन व्यवहारमा कहिल्यै लागू गर्नु नपर्ने, झण्डाप्रतिको माया दर्साए पुग्ने, व्यवहारमा कहिल्यै कम्युनिस्ट हुनु नपर्ने, सधैँ माक्र्स, लेनिन र माओका सिद्धान्त र आदर्श भट्याए पुग्ने जात जस्तो भएको छ, कम्युनिस्ट । यो नेपालका कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा ठूलो दुःख हो ।
र, सरकारले गर्नुपर्ने तर नगरेको अन्तिम र तत्कालीन महत्त्वको काम हो– नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने । जबसम्म जनताको दैनिकीमा सुधार आउँदैन अहँ परिवर्तित व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा कायम हुन सक्दैन । अनि दैनिकी बदल्नका लागि आम नागरिकको दैनिकी कसरी चलेको छ ? उनीहरूको अहिलेको आवश्यकता के हो ? के भयो भने उनीहरूका समस्या हल हुन्छन् ? यी यावत प्रश्नसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ । तर सरकारी अङ्गहरू जनतासँग सहकार्य गर्न हैन, निर्देशन अजमाउन खडा भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू एकाएक छोटे राजनमा रूपान्तरित भएका छन् । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारभित्र ससाना राजारजौटा पनि गाउँघर पुगेका छन् । अनि आम नागरिकको दैनिकी तिनको सम्मान र व्यवस्थापनमै बित्ने गरेको छ ।
त्यसैले सरकार ! समृद्धिका सपनाहरूको बजारीकरण हुँदै गर्दा त्यो सपनामा जनताको कष्टकर दैनिकी पनि जोडियोस् । खस्किँदो शान्ति सुरक्षा र दैनन्दिनी बलात्कृत हुने चेलीहरूको कारुणिक दृश्य पनि याद रहोस् । महिनौँसम्म विभत्स ढङ्गले हत्या गरिएकी आफ्नी छोरीको हत्याराको खोजीमा भौँतारिरहेका बाआमाको विदारक अनुहार देखियोस् । अनि राजधानीमै अभावमा पिल्सिएका दिनहीन नागरिकदेखि दूरदराजसम्म आफ्नो भविष्य अजमाउन नसकी खुइया गर्दै मलिनो अनुहार लिएर चौतारीमा अडेल लाग्ने नागरिकका दुःख पनि चित्रित होस् ।
विकास र समृद्धिको मोटो कुराले मात्र होइन, ती नागरिकको दैनिकी बदल्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कामहरूले मात्र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ । सरकारले घोषणा गर्न लागेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारिता केवल ल्याम्पसोस्टमा झुन्ड्याइएको तस्बिर अनि अखबारमा प्रकाशित ज्याकेट विज्ञापनले प्रमाणित गर्दैन भन्ने बुझ्न दार्शनिक ज्ञान चाहिँदैन । याद रहोस् भोको पेटले समृद्धिको सङ्गीत बुझ्दैन ।